Aged Shelf Corporations र Companies कसरी प्रयोग गर्ने
हाम्रो नयाँ कार्यक्रम पहिले भन्दा राम्रो छ। हामी एक व्यक्तिलाई पठाउछौं जसले अचल सम्पत्तिमा लाखौं डलर तपाईंको शहरमा एक-अर्कालाई तालिम दिनको लागि बनाएको छ। ग्रहमा यो कुनै पनि कार्यक्रम छैन: तपाइँको आफ्नै निजीकृत 1-on-1 प्रशिक्षण जसले अचल सम्पत्ति मिलियन साबित गरेको छ। उहाँले तपाईंलाई कार्यक्रम कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनुहुनेछ, तपाईंको क्षेत्रमा उपलब्ध रूपमा रियल एस्टेट सम्झौताहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्। हाम्रोसँग एक-एक-एक प्रशिक्षणमा एक भर्चुअल 100% ग्राहक सन्तुष्टि दर छ। यो प्रशिक्षण एक विशेष आयुर्जीय शेल्फ निगम प्याकेजसँग समावेश छ जुन प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न सकिन्छ।
प्रशिक्षण तपाईलाई निर्दिष्ट प्याकेजको साथ प्रदान गरिएको छ साथै तपाईले वृद्ध कम्पनीको खरिद गर्नुभएको छ, साथै हामी एक Paydex स्कोर र डन एन्ड ब्राडस्ट्रिट मूल्याङ्कनको निर्माण गर्दछौं। (एक-एक-एक-एक पाठ्यक्रम $ 9995 प्रति व्यक्ति हो - र फरक रूपमा खरिद गर्न सकिन्छ।)
अर्डर गर्न, 888-444-4412 लाई कल गर्नुहोस्
प्रत्येक व्यक्तिलाई छनौट गर्ने क्षमता चाहिन्छ। धेरै भन्दा अमेरिका को आफ्नो मौजूदा कार्यहरुमा यति निवेश गरिन्छ कि एक व्यापार उद्यम शुरू को विचार प्रश्न को बाहिर छ। सायद तपाईंको व्यवसाय हो र अधिक नगद प्रवाह उत्पन्न गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। लगानीकर्ताले पैसाको ठूलो रकम बनाउन को लागी कुनै निजी लगानी वा जोखिमसँग क्षमता बनाउन चाहन्छन्। के तिनीहरू साँच्चै चाहन्छन् स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता हो। पैसा सुरक्षित र चाँडो बढ्नको लागि रियल स्टेट भनेको सबैभन्दा राम्रो गाडी हो। "जम्प स्टार्ट" तपाईंलाई वित्तीय स्वतन्त्रताको बाटोमा राख्नेछ।
यो कक्षामा तपाइँ कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ:
अहिले खर्चयोग्य मासिक र लूप योग नगद प्रवाह उत्पन्न गर्नुहोस्!
जब तपाईं अचल सम्पत्ति खरीद गर्नुहुन्छ आफ्नो जेबमा पैसा राख्नुहोस्
तपाईंको अवस्थित व्यवसायको लागि पूंजी उठाउनुहोस्
आय कर घटाउन रियल एस्टेट प्रयोग गर्नुहोस्
15-18% 1st बंधकद्वारा ग्यारेन्टी कमाउनुहोस्
लगभग कुनैपनि समय लगभग अचल सम्पत्तिलाई कसरी वित्त पोषण गर्ने
ठूला मुनाफाहरूको लागि बैंकिङबाट पूर्वनिर्धारित टिप्पणीहरू खरिद गर्नुहोस्
दलाल आफैलाई इन्टरनेट प्रयोग गरेर वित्त पोषण गर्नुहोस्
तपाईंको IRA कसरी रियल एस्टेट कोष गर्न प्रयोग गर्ने बारे जान्नुहोस्
अर्को 30 दिनमा अचल सम्पत्ति किन र आफ्नो जेबमा पैसा राख्नुहोस्
कसरी इक्विटीमा भर्खरै बढेको वृद्धिबाट लाभ उठाउन र एक रियल एस्टेट "बबल"
खरिदहरू, रखरखाव वा टाउको दुखाइसँग अचल सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सिक्नुहोस्
बजार आवासीय र व्यावसायिक अचल सम्पत्तिमा कच्ची भूमि विकास गर्नुहोस्।
प्रशिक्षण एक कदम-दर-सिद्ध साबित कार्यक्रम हो जुन तपाई तुरून्तै सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। (तपाइँ भर्खरको प्रशिक्षकको यात्रा, आवास र खानाको आवरणमा राख्नुहोस्।) तपाईंको सोफेको आरामको रूपमा सानो रूपमा4घडीको रूपमा लगानी गर्नुहोस्, निगम र सीमित साझेदारीको प्रयोग गरी सबै व्यक्तिगत जोखिम बिना। कुनै कर्मचारीहरू वा सूची छैन! अवस्थित ऋण बन्द गर्नुहोस् र खर्चयोग्य नगद प्रवाह बढाउनुहोस्। आफुलाई मनपर्ने कुराहरूको लागि आफ्नो समय र पैसा प्रत्यक्ष गर्ने क्षमता दिनुहोस्। "शुरुवातमा जानुहोस्" मा आउनुहोस् र तपाईंले खोज्नु भएको वित्तीय स्वतन्त्रता फेला पार्नुहोस्।
यो ध्यान दिनुहोस् कि यो एक रियल एस्टेट प्रशिक्षण र धन सहायता कार्यक्रम हो। अनुदान ऋणदाता अनुमोदनको विषय हो। कुनै ग्यारेन्टीहरू छैनन् कि कुनै पनि विशेष लेनदेन को लागी वित्त पोषित गरिनेछ।
ग्राहक प्रशंसापत्र: इलियट टेब्रोन - डलास क्यूब्याकका लागि पूर्व एनएफएल खेलाडी
"मैले व्यक्तिगत रूपमा शेल्फ कम्पनीहरूलाई कम्पनी समावेश गरेको प्रस्तावित क्रेडिट सहायताको साथ सिफारिस गर्छु। डलास क्यूब्याकका लागि पहिले फुटबल खेलाडी र अब म मिशिगनको एक इजाजतपत्र बिल्डरको रूपमा मैले कहिल्यै यस्तो प्रोग्राम देखेको छु जहाँ तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ जहाँ तपाइँ त्यहाँ कार्यक्रममा प्रस्तावित भन्दा चाँडो छिटो चाहनुहुन्छ जहाँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम खरिद गरेको छु र मेरो कम्पनीको क्रेडिट [प्रशिक्षण] कम्पनीहरू प्राप्त गरेका धेरै सहभागीहरूको लागि उत्तरदायी भएको छ। यी केटाहरू प्रस्ताव प्रस्ताव असाधारण छ। कम्पनीहरु सीईओ शामिल र पाठ्यक्रम प्रशिक्षक एक वास्तविक, चरण दर-चरण सफलता सूत्र प्रदान गर्दछ जुन वास्तविक संसार मा काम गर्दछ। म स्पष्ट देख्न सक्छु कि तिनीहरू साँच्चै आफ्ना क्लाइन्टहरू सेवा गर्ने र यस कार्यक्रमबाट प्राप्त गरेका मूल्यहरूलाई अधिकतम हेरचाह गर्छन्। "
(श्री टर्ब्रो एक ग्राहक हो र एक कर्मचारी होईन वा कम्पनीहरु को शामिल नहीं प्रतिनिधि।)
कम्पनीहरु मा शामिल भएको छ, हाम्रो ठूलो उद्देश्य यो छ, "हाम्रो ग्राहकहरु को वित्त को रक्षा र बढावा गर्नुहोस।" हाम्रो ट्रेनर ईमानदारी देखि सबै जानकार र अनुभवी रीयल एस्टेट स्पीकर र निवेशक मैले कभी पनि जान्दछन्। उहाँ एक प्रतिभाशाली र मनोरञ्जन संवाददाता हुनुहुन्छ। उनको शिक्षाले तपाईंलाई अचल सम्पत्ति मार्फत आफ्नो आर्थिक वृद्धि गर्न छिटो बाटोमा राख्न सक्छ। म अत्यधिक अनुशंसा गर्छु कि तपाईं यस सम्पत्ति को अचल सम्पत्ति को सफलता देखि जानें।
निम्न हाम्रो ग्राहकहरु र / वा एक व्यक्ति जसले हाम्रा ग्राहकहरूलाई प्रशिक्षण दिएका विद्यार्थीहरू हुन्।
".. एक हप्तामा हामी हाम्रो जेबमा $ 18,000 भन्दा बढी रकम बन्द गर्यौं र $ 37K जब यो बेच्दछ। अर्को, हामीले दुई घरहरू बनायौं र उनीहरूलाई हाम्रो कर्पोरेट क्रेडिट लाइनको साथ तिर्नुभयो। अद्भुत! धन्यबाद!
- डवेन र जेनेट एन्डरसन
"म हाल सात सौज चलिरहेको छ र यस वर्ष एक्लै $ 300,000 भन्दा बढी बनाउनेछ। मलाई चिन्ता छैन कि कसरी पैसा चाहिन्छ मलाई। "
"मैले भर्खरै राम्रो भाग लिने वित्तिकै कक्षामा पढें। सुरूबाट अन्त्य गर्न, मैले यसबाट वित्त पोषणको बारेमा बढी सिकें
मैले सोचेको भन्दा सजिलो थियो। "
- चार्ल्स हनीकोटक
"... म एक भिजुअल व्यक्ति हुँ र राउण्ड तोडफोड वित्त पोषण राम्रो थियो ... म एक फरक तरिका मा सोचिरहेको छु।"
- जेनिस डे
"मैले3लाख अचल सम्पत्तिमा खरिद गरेको छु र म थाहा छैन कि यी चीजहरू सम्भव भए। म चाहन्छु
ज्ञात छ कि कसरि मेरो आफ्नै नोट पहिले दलाल गर्न को लागी। मैले धेरै पैसा कमाएको थिएँ। "
- सखद रसूल
"म यो कक्षालाई सबैलाई सुझाव दिन्छ कि सौन्दर्यहरू बन्द गर्न मनपर्छ ... धेरै राम्रो!"
- मत्ती रबर्ट्स